Nei Kambani Yako Isina Kuisa CMS? | Martech Zone
Mugovera, October 17, 2009 Mugovera, October 24, 2020 Douglas Karr
Pane hurukuro zhinji pane ino blog nezve optimization, kutendeuka optimization, inbound kushambadzira, yekutsvaga injini optimization… kunyangwe multivariate kuyedza uye kumhara peji optimization. Dzimwe nguva tinokanganwa kuti nzvimbo zhinji dzichiri muma1990 uye dzakaomarara-dzakarongedzwa HTML mapeji akagara asina kuchinjika pane server!
Ini ndakapinda mukati kuburikidza neFTP, ndotora faira uye ndogadzirisa zvakakodzera kuburikidza neDreamweaver. Ini ndakabva ndavataurira kuti basa rese iri raive risina basa. Mumwe mutengi achangoburwa aive atumira mushambadzi wavo kuHTML kudzidziswa kuitira kuti vagone kuvandudza saiti yavo. Izvi zvaive zvakare zvisina basa. Nepo ruzivo rwewebhu matekinoroji rwunobatsira, yakanaka yemukati manejimendi manejimendi inogona kupa kambani yako zvese zvishandiso zvinodiwa kuchengetedza yako saiti kuvandudzwa zuva nezuva uchibvisa dzidzo nezvipingaidzo zvehunyanzvi.
Zvemutengo wemakirasi kana iyo irikuenderera kubhadhara webhu mukomana, makambani aya aigona kunge akashandisa hurongwa hwehutongi hwakasimba hwavanogona kudzora.
Kune mumwe akadaro mutengi, Pepa-Lite, a gwaro manejimendi sisitimu mupi, isu takashandisa WordPress. Kune mamwe akati wandei anokwanisa zvemukati manejimendi ekugadzirisa pamusika, asi iyi yaive nemabhero ese uye muridzo uye zvaive nyore kuchinjika kune zvinodiwa nevatengi.
Vanenge vese domain registrar ikozvino inopa yavo zvemukati manejimendi sisitimu kana ine auto-kumisikidza yemamwe zvemukati manejimendi masisitimu. Zano rangu chete nderokunamatira kune chikuva chine kubvumidzwa kwakakura uye nharaunda yakakura yekusimudzira nayo.
Ramba uchifunga kuti kuisa CMS yemahara hakuna mahara, zvakadaro. Kugadziridza kwekugadzirisa kunofanirwa! Kuva mukomana mukuru pane yemahara CMS block inozvikweretesa kune mamwe matsotsi ari kuyedza hack chikuva chako. Iyo yemahara CMS inogarwa pane yakachipa yekutambira chikuva zvakare haizomira tani yetraffic - inoda kuti iwe simbisa zvivakwa zvako.
Iwo mabhenefiti anodarika njodzi kana iwe uine murume anobatsira-murume kuti uchengete CMS yako iine hutano, zvakadaro. Pamwe chete nekuisa uye kugadzirisa iyo CMS:
Takaita imwe yekumashure-kumagumo optimizations yekutsvaga injini neakakodzera plugins uye theme fomati.
We yakagadzirirwa peji rekupinda saka vatengi vavo vaigona login uye uone zvakatemerwa zvemukati.
Isu takagadzirisa uye takabatanidza a quote plugin kutenderedza vatengi makotesheni pane peji peji peji.
Takatenga nekuisa yakasimba fomu mhinduro saka vaigona kutora inbound kushambadzira inotungamira.
Isu takagadziridza htaccess faira kuendesa zvakare maLinks ekare kunzira nyowani kune zvakafanana zvirimo. Isu takaisawo a redirection plugin kubata zvimwe zvekudzorera zvido. Iyi inowanzo iri nhanho isingatariswe newebhu vagadziri uye inogona kuuraya yako optimization. Ita shuwa kuti zvako zvekare zvinongedzo zvichiri kushanda… ingozvinongedzera kune izvo zvitsva zvemukati!
Isu takaisa madingindira uye plugins kuitira kuti saiti izopa zvakakwana pa iPhone, iPod touch uye zvimwe nhare mbozha. Vanhu varikushandisa nharembozha kubhurawuza masayiti zvakanyanya uye nekuwanda… yako saiti inoverengwa pazvinhu izvi here?
Isu takagadzirisa breadcrumbs pazvikamu zvesaiti ine kufamba kwakadzika kuitira kuti vatengi vakwanise kufamba zviri nyore.
Ehezve, isu takagadzira Webmasters, Stats plugins, uye Analytics futi kuti kambani igone kuongorora traffic yayo.
Zvichida zvakanyanya kukosha, isu tinoenderera mberi nekubatsira iyo kambani kutora kune itsva chikuva uye kuishandisa nemazvo. Iyo CMS senge WordPress inogona kutyisidzira pakutanga. Ini ndinogona kukuvimbisa kuti zviri nyore kwazvo kupfuura kutsanangura FTP uye HTML, hazvo!
Chekupedzisira, kunyangwe WordPress iri rakakodzera blogging chikuva, ndinotenda nokutendeseka iri nani zvirinani webhusaiti zvemukati manejimendi manejimendi. Iko kune software seyese mhinduro se Marketpath dzinopa manejimendi manejimendi, kublogi, uye kunyangwe ecommerce.
Tags: cmscontent managementzvemukati manejimendi systemContent Marketing
Alterian Inotangisa Yemagariro Media Kushambadzira Kanzuru
Gumiguru 21, 2009 pa 12:42 AM
Wataura zvakanaka, Doug.
Kunyange ndakave nezviitiko zvakafanana nevazhinji vevaridzi vebhizinesi vachizviita nenzira yazvaiitwa zana rapfuura, ichi ichokwadi zvakare:
"CMS yakaita seWordPress inogona kunetsa pakutanga."
Varidzi vemabhizinesi madiki, kunyanya, tsvaga CMS yakawandisa basa. Pane zvakawandisa zvekurangarira kana iwe wakabatikana kuita bhizinesi rako uye kutumira chimwe chinhu chitsva nguva nenguva. Nenguva yaunosvika pakushandisa iyo CMS zvakare, iwe wakanganwa kuti unozviita sei. Uye ndiani anoda kuverenga bhuku rekushandisa?
WordPress zvirokwazvo iri nani kupfuura Joomla kana Drupal maererano neyakajairwa admin usability. The workflow is more intuitive kana ichienzaniswa nemamwe maviri.
Chii chave chiitiko chako neCMSs kune varidzi vemabhizinesi madiki? Wakamboedza dzimwe nzira "dzakareruka" here?